Wararka Maanta: Jimco, Apr 5 , 2013-Dowladda Somalia oo soo Bandhigtay Qorshe cusub oo dib loogu Habayenayo Maamulka Miisaaniyadda soo gasha Dalka
Qorshahan ayaa ah mid quseeya nidaamka ama habka loo maamulayo Miisaaniyadda Dowladda ayadoo diyaarintiisana ay qaadatay mudo bilooyin ah waxaana shirkan ay Wasaaraddu ku qabatay magaalada Muqdisho kalasoo qeybgalay Safiirro iyo khuburro ka socotay beesha Caalamka.
Wasiirka maaliyadda iyo qorsheynta xukuumadda Soomaaliya, Maxamuud Xasan Suleymaan ayaa sheegay in muhiimadda qorshahan uu yahay sidii sannadaha soo socda loo heli lahaa nidaam hagaagsan oo lagu maareynayo dhaqaalaha dalka; iyadoo la saxayo qaladaadka jira, taasoo uu sheegay inay fursad u siin doonto shacabka inay si toos ah ula xisaabtamaan dowladda.
Shirkan oo socday saddex saacadood oo xiriir ah ayaa muhiimad gaar ah u leh dowladda Soomaaliya iyo beesha caalamkaba; maadaama muddadii uu socday laga dooday qodobbo dhowr ah oo dhammaantood quseeya sidii dib loogu hagaajin lahaa habka loo maamulo hantida dowladda soo gasha iyo tan ka baxda. Waxaana wasiirku uu xusay in muhiimadda ay dowladda u leedahay hagaajinta nidaamka dhaqaalaha uu yahay qayb ka yahay lixda tiir ee eay ku shaqeynayso.
“Dib u habeyntani waxay muujinaysaa ama fududeyneysaa in dhammaan la xayiro kharashaadka sida aan habbooneyn ku baxa; in lahirgeliyo howlaha kale ee dowladda looga fadhiyo inay wax ka qabato sida: ammaanka, waxay kaloo noo suuro-gelinaysaa inaan aaminaad ama kalsooni ka helno beesha caalamka iyo inaan kula macaamilno Bankiga Adduunka iyo sidoo kale IMF oo ah hay’adda lacagta adduunka,” ayuu yiri wasiirka maalliyadda iyo qorsheynta.
Haddaba qorshaha ay wasaaraddu soo diyaarisay ayaa qodobbada ugu muhiimsan waxay kala yihiin:
Si afartanka sano ee soo socota shacabka loogu soo bandhigi lahaa nidaamka dhaqaalaha dalka.
In la xayiro ama la adkeeyo dhaqaalaha sida fudud uga baxa dowladda gudaha iyo dibaddaba.
In dhaqaalaha baxaya ay ka muuqato muhiimadda meelaha la doonayo in lagu bixiyo ama lagu kharashgareeyo.
Ugu dambeyn, wasiirka maaliyadda iyo qorsheynta, wuxuu sheegay in tani ay ka duwan tahay tii hore dowladduna ay qorshe la timid, qorshahaasna ay hirgelintiisa dowladdda oo dhan isku raacsan tahay, isagoo rajo ka muujiyay in qorshahaas uu u hirgalo sida loo dajiyay.